Quality Management - Spiceworks Myanmar
ကျွန်မကတော့ Spiceworks Myanmar Company တွင် Administrator အဖြစ် ဝင်ရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အိဖြိုးမွန် ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
အပတ်စဉ် ဝေမျှနေကျဖြစ်တဲ့ Spiceworks Myanmar မှ ဘလော့ခ်များကို ဖတ်ရှုပေးနေသည့်အတွက် ပထမဦးစွာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ်မှာ ဝေမျှပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ အရည်အသွေး စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး အနည်းငယ် ပြောပြပေးပါရစေ။
Quality ဆိုတဲ့စကားလေးကတော့ Latin ဘာသာစကားကနေ ဆင်းသက်လာတဲ့ စကားလုံးလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုကို နည်းနည်းလေး ထပ်လေ့လာကြည့်ကြပါမယ်။
အခြေခံအားဖြင့် အရည်အသွေး စီမံခန့်ခွဲမှုမှာ ပါဝင်တဲ့
(၂) အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု
(၃) အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှုအခြေခံ ကိရိယာများ
(၄) အရည်အသွေး အာမခံ
(၅) စုစုပေါင်း အရည်အသွေး စီမံခန့်ခွဲမှု
(၆) အရည်အသွေး ကုန်ကျစရိတ် တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ သတိထားသင့်တဲ့အချက်တွေကတော့ အစီအစဉ်မချခင်၊ အစီအစဉ်ချဆဲ၊ အစီအစဉ်ချပြီး အခြေအနေများနှင့် မပြုလုပ်ခင်၊ ပြုလုပ်ဆဲ၊ ပြုလုပ်ပြီးအခြေအနေများကိုပါ အမြဲတမ်း လေ့လာဆန်းစစ်နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
1930 နောက်ပိုင်းလေ့လာမှုအရ အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှု၏ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့် တိုးတက်မှုများဟာ ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ရှိပါတယ်။ ထိုအရာတွေကတော့
(၁) အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Q. C)
(၂) အရည်အသွေး အာမခံ (Q. A)
(၃) အရည်အသွေး အင်ဂျင်နီယာ (Q. E)
(၄) စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း (ISO)
(၅) စုစုပေါင်း အရည်အသွေး စီမံခန့်ခွဲမှု (TQM)
(၆) စာရင်းအင်းလုပ်ငန်းစဉ် ထိန်းချုပ်ရေး (SPC)
(၇) တိုင်းတာသတ်မှတ်ခြင်း၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းတွေဟာ အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုကို ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်သောအရွေ့ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ် (၂) စုအထိ ကျင့်သုံးလာပုံနှင့် ထိုဆယ်စုနှစ် (၂) ခုမှ ယခုနောက်ပိုင်းအထိ ပြောင်းလဲကျင့်သုံးပုံမှာ မတူညီပဲ ပိုမိုကောင်းမွန်လာတာကို တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကွာခြားမှုတွေကတော့ အရင်က ထုတ်ကုန်အပေါ်မှာ ဦးတည်ကြပြီး ယခုအခါ မိမိတို့၏ ဝယ်ယူသူအတွက် အလေးပေးလာခဲ့ကြပါတယ်။ ယခင်ကတော့ ဝန်ဆောင်မှုနှင့်စရိတ်ကို ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ကြပြီး ယခုအခါမှာတော့ အရည်အသွေးကို အဓိကထား ဦးစားပေးလာကြပါပြီ။ အရည်အသွေးပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတဲ့ အချိန်မျိုးမှာဆိုရင်လည်း ယခုအခါမှာ ကာလတိုအတွက် မကြည့်ပဲ ရေရှည်ကို စီစဉ်ပြီး ပြင်ဆင်လာကြတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းတွင်လည်း လူတိုင်းက ပိုမိုတာဝန်ယူမှု ရှိလာကြပါတယ်။ ထို့အတူ ပြဿနာဖြေရှင်းရမည့် အပိုင်းတွင်လည်း မန်နေဂျာတစ်ဦးထဲကသာ တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းပေးရတာမျိုး မဟုတ်တော့ဘဲ အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုလုံးရှိ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီက တာဝန်ယူဖြေရှင်းနိုင်ကြတာကို တွေ့မြင်လာရပါတယ်။
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုရဲ့ အခြေခံကိရိယာတွေကတော့ (၇) ခုရှိပါတယ်။ ဒါတွေကတော့
(1) Cause and Effect Diagram
(5) Scattered Diagram
(6) Pareto chart
(7) Histogram တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ အရည်အသွေးကို အာမခံမှုအပိုင်းပါ။ ထိုအပိုင်းမှာ အရည်အသွေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ရေးသားပြီး ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် လမ်းညွှန်မှုများပါရှိခြင်း၊ အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့် အရည်အသွေးပြည့်မှီသော သတင်းအချက်အလက်စနစ်များစွာ ပါဝင်ပါတယ်။ ထို့အတူ အရည်အသွေးထောက်ခံချက်နှင့်အတူ စံနှုန်းပြည့်စနစ်များဟာလည်း အရည်အသွေး အာမခံမှုအပိုင်းမှာ လွန်စွာမှ အရေးပါပါတယ်။ အရည်အသွေးအာမခံမှုနှင့် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုတွင် အာမခံမှုကလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဦးတည်လျှင် ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းက ထုတ်ကုန်ကို ဦးတည်ပါတယ်။ အရည်အသွေးအာမခံမှုက စည်းစနစ်ကျမှုအပေါ်မှာ အာရုံစိုက်ပြီး ကျန်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုတော့ ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းက အာရုံစိုက်ထားပါတယ်။ ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းက ထုတ်ကုန်များကို အတည်ပြုပြီးလျှင် အရည်အသွေး အာမခံမှုအပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ ထုတ်ကုန်များကို အရည်အသွေးပြည့်မှီသော ထုတ်ကုန်များအဖြစ် ဖန်တီးကြရပါတယ်။ ဒါကတော့ Quality Management နဲ့ပတ်သက်ပြီး အနည်းငယ်သိထားသမျှကို ပြန်လည်ရေးသားပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့အတွက် ‌ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။ သာယာအေးချမ်းသောနေ့ရက်လေး ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။
Next Post:Customer Service